LEGO Minecraft 21169 ပထမ ဦး ဆုံးစွန့်စားမှုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
10 / 05 / 2021 11 / 05 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 596 Views စာ0မှတ်ချက် 21118 အဆိုပါမိုင်း, 21137 အဆိုပါတောင်ဂူ, အဲလက်စ်, အတုံးအတစ်, နွားမ, ဆိုးဆေးကြောင်, earth, အားကစားပြိုင်ပွဲ, ဂိမ်း, ဦး ချိုသိုး, Lego, Lego Minecraft, lego ပြန်လည်သုံးသပ်, Lego သုံးသပ်ချက်များ, Minecraft, Minecraft အီးarth, ကျောက်တံတား, ကဲ, ဆန်းစစ်ခြင်း, reviews, သိုး, အရိုးစု, အရိုးစု, စတိဗ်, ဗွီဒီယိုဂိမ်း, ဗီဒီယိုဂိမ်းများ
Lego Minecraft 21169 ပထမ ဦး ဆုံးစွန့်စားမှု ယနေ့အထိစျေးအသက်သာဆုံးအဆင့်မြင့်သတ္တုတွင်းအဖြစ်သတ်မှတ်ထားသည်၊ သို့သော်၎င်း၏အရင်းအမြစ်များကိုဖျက်သိမ်းလိုက်သောအခါ၊ ဤအုတ်တံတိုင်းတည်ဆောက်ခြင်းအတွက်နံရံတွင်ရေးသားခြင်းလား။
21169 ပထမ ဦး ဆုံးစွန့်စားမှု အထူးသအပေါ်ထားပါတယ် Minecraft Eartဇ, လိမ့်မည်တဲ့ဂိမ်း မကြာမီပိတ်ပါ စစ်ဆင်ရေး၏တစ်နှစ်ကျော်ပြီးနောက်။ ၎င်းသည်သူ့ဟာသူ ap သတ်မှတ်ရန်မစီမံနိုင်လျှင်ကံကြမ္မာသည်တည်ဆောက်မှုအတွက်နိမိတ်လက္ခဏာမဟုတ်ပါart မဆိုများအတွက်မဖြစ်မနေ - ရှိသကဲ့သို့ Minecraft ပန်ကာ။
theme: Lego Minecraft အမည်သတ်မှတ်မည် - 21169 ပထမ ဦး ဆုံးစွန့်စားမှု ဖြန့်ချိ: မတ်လ 1, 2021
စျေးနှုန်း: £ 54.99 / $ 69.99 / € 59.99 အပိုင်းပိုင်း: 542 အသေးစားပုံများ: 7
ပိုကြီးတဲ့သတ္တုတွင်းအစုံရဲ့အယူအဆဟာအသစ်အဆန်းတော့မဟုတ်ပါဘူး Lego Minecraft လွန်ခဲ့သောခုနစ်နှစ်ကျော်ကလေးကြိမ်ကွပ်မျက်ခံခဲ့ရသည်။ အဆိုပါလမ်းကြောင်းသစ် start2014 အဆိုပါသတ္တုတွင်း, quintessential ၏တ ဦး တည်းနှင့်အတူ 21118 ခုနှစ်တွင် ed Minecraft ဒုတိယစျေးကွက်တွင်တစ်ပြားတစ်ချပ်စီယူဆောင်လာခဲ့သည့်မော်ဒယ်များ။
ဤအဆင့်မြင့်သတ္တုတွင်းမော်ဒယ်လ်များသည်အဓိကအကြောင်းအရာဖြစ်လာပြီး ၂၁၁၃၇ Mountain Cave တွင်အကြီးဆုံးဖြစ်သည် Lego Minecraft ယနေ့အထိတည်ဆောက်။ 21169 ပထမ ဦး ဆုံးစွန့်စားမှု ထို့ကြောင့်ဖြည့်ရန်ကြီးမားပြီးပိတ်ဆို့ထားခြင်းမရှိသောဘွတ်ဖိနပ်အချို့ရှိသော်လည်းဤအစု၏ဒီဇိုင်နာများသည်လမ်းတစ်လျှောက်ရှိသင်ခန်းစာများစွာကိုအသုံးပြုခဲ့ပုံရသည်။
၎င်းသည်မော်ဒယ်၏အဆင့်နှစ်ခုစလုံးကိုအတူတကွချိတ်ဆက်ထားသည့်မီးခိုးရောင်ကြီးမားသော pilon element များ၌ထင်ရှားသည်။ သူတို့ကအရေးပါတဲ့ p အဖြစ်ပြသထားတယ်art နီးပါးတစ်ခုလုံးကိုတည်ဆောက်စဉ်အတွင်း set ကိုတစ်လျှောက်လုံးအမျိုးမျိုးသောအချက်များမှမျိုးစုံပူးတွဲဖိုင်များနှင့်အတူဖွဲ့စည်းပုံ၏။
ဆောက်လုပ်ရေးကာလအတွင်းငြီးငွေ့ဖွယ်ကောင်းပုံရသော်လည်းပုံမှန်အားဖြင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်လန်းဆန်းစေသည့်ရှုပ်ထွေးသောအတွေ့အကြုံကိုရရှိစေသည် Lego Minecraft မော်ဒယ်များ။ ၎င်းသည်အစုအဝေးကိုလည်းအံ့သြဖွယ်ကောင်းစေသည်။ ၎င်းကိုကိုင်တွယ်စဉ်အပိုင်းအစများပြတ်တောက်မည်ကိုသင်စိုးရိမ်စရာမလိုပါ။ apart သတ္တုရိုင်းကနေ - ဒါကဒီဇိုင်းအားဖြင့်ပါပဲ။
ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်တော့တခြားအရာတွေမှာတွေ့နိုင်တာထက်အများကြီးကွာခြားပါတယ် Lego Minecraft အစုလိုက်အပြုံလိုက် (အစိမ်းရောင်၊ အညိုရောင်နှင့်အစိမ်းရောင်အပိုင်းအစများ) ဖြင့်လူအုပ် (ရံဖန်ရံခါလူစုခွဲ) များပြုလုပ်သည် Minecraft သတ္တဝါအဘို့အသက်တမ်း) သို့မဟုတ်သတ္တုရိုင်း။ သို့သော်လူအုပ်ကြီးများပင်လျှင်အခြားမော်ဒယ်များထက် ပို၍ ကွဲပြားသည်။
ဒီအစုံဟာ spin-off မိုဘိုင်းဂိမ်းအပေါ်အခြေခံတယ်ဆိုတာမသိပါဘူး Minecraft EartAR နည်းပညာသည်အစစ်အမှန်ကမ္ဘာတွင် block-based Adventures များကိုရရှိနိုင်သည့်ကစားသမားများကိုတွေ့မြင်ခဲ့ပြီး၊ AR နည်းပညာသည်အဖြစ်မှန်များကိုအပိုင်းအစများဖြင့်အစားထိုးခဲ့သည်။ Minecraft။ ထို့နောက်၎င်းတို့သည်လာမည့်စွန့်စားခန်းအတွက်ဆုများနှင့်ပစ္စည်းများကို ၀ င်ငွေရရှိစေရန်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
ဤအယူအဆသည် Mojang ရည်ရွယ်ထားသည့်အတိုင်းအက်ပလီကေးရှင်းနှင့်အတူထွက်ပေါ်လာမည်မဟုတ်ပါ ဒီနှစ်ပိတ်ပစ်ဒါပေမယ့်ဒီစုံတွဲဟာသူ့ရဲ့ cuboid နဲ့ပွင့်လင်းတဲ့သဘောသဘာဝကြောင့်ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုကိုပြေပျောက်စေပါတယ်။ အကွာအဝေးတိုင်းကိုလှည့်ပတ်ကြည့်ပြီးသင်သွားတဲ့အခါဇာတ်ကောင်နေရာချထားတာကိုတွန်းလှန်ဖို့ခဲယဉ်းပါတယ်။
နှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာ 21169 ပထမ ဦး ဆုံးစွန့်စားမှု ၏ဗီဒီယိုဂိမ်းကမ္ဘာကြီးကိုရန် Minecraftအနည်းငယ်ကိုက်ညီမှုရှိပါတယ်။ ဒီ set ကိုပိုကြီးတဲ့ display မှာထည့်သွင်းနိုင်ခြင်းသို့မဟုတ်၎င်းကိုသီးခြားအပိုင်းတစ်ခုအဖြစ်ထားနိုင်ခြင်းကိုအထူးဂရုစိုက်ပါတယ်။
blocky ပလတ်စတစ်သည်အစစ်အမှန်ကမ္ဘာနှင့်တွေ့ဆုံသည့်အဆောက်အ ဦး ၏အစွန်အဖျားသည်အောက်ခြေရှိ monotone ကျောက်တုံးနှင့်မြက်၏အပေါ်ဆုံးအလွှာနှင့်အတန်ငယ်မညီမမျှဖြစ်ရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ၎င်းသည်ကမ္ဘာ့မျိုးဆက်အတွင်းမည်သို့ဖြစ်ပျက်နိုင်သည်ကိုကောင်းစွာကိုယ်စားပြုသည် Minecraft နှင့်အစုသည်ဗီဒီယိုဂိမ်းကမ္ဘာ၏အမှန်တကယ်အချပ်နှင့်တူခံစားစေသည်။
play features များသွားသည်နှင့်အမျှအဓိကလုပ်ဆောင်ချက်ငါးခုရှိသည်။ သို့သော်၎င်းသည် set ၏ကိုယ်နှိုက်တွင်ဇာတ်ကောင်များ၏ကျယ်ပြန့်သောကြောင့် roleplay အတွက်ဖြစ်နိုင်ချေများရှိသည်။ မော်ဒယ်၏အောက်ခြေတွင်ကျောက်တုံးကျောက်တုံးနောက်ကွယ်ရှိအန္တရာယ်ကင်းစွာချော်နေသောချော်ရည်စီးဆင်းမှုကိုတွေ့လိမ့်မည်။ သို့သော်အနီးအနားရှိပိတ်ပင်တားဆီးမှုကိုလှည့်စားပြီးအဲလက်စ်သည်ရှုပ်ထွေးသောရှုပ်ထွေးမှုတစ်ခုကြုံတွေ့ရနိုင်သည်။
အနီးအနားမှာ, သိုးမိုင်းစီးart လမ်းကြောင်း၏သေးငယ်တဲ့အရှည်ပေါ်နှင့်တစ် ဦး ရိုက် နည်းပညာ သင်ကသစ်သားကြားခံကိုဖယ်ရှားလိုလျှင်မော်ဒယ်၏နောက်ကျောရှိ pin သည်သိုးကိုရှေ့သို့ရိုက်သည် - ရေထဲသို့ဖြစ်နိုင်သည်။ အပေါ်ကအဆင့်သည်လမ်းကြောင်းများပိုမိုများပြားသည်။ သို့သော်ဤအပိုင်းများထဲမှတစ်ခုသည်ကျန်အပိုင်းများထက်ပိုမိုတည်ငြိမ်ပြီးသက်ဆိုင်ရာလီဗာကိုတွန်းခြင်းဖြင့်အစုမှထုတ်ပစ်နိုင်သည်။ မည်သည့် TNT ကိုမျှဤလုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုခုအနီးတွင်ရှာ။ မတွေ့ရပါ။
ကြမ်းပြင်နှစ်ခုကိုဆက်သွယ်ခြင်းသည်ရေတံခွန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ရေညှိစင်တစ်ခုဖြင့်၎င်းတို့အကြားအသေးစားဓာတ်ပုံများကိုသယ်ဆောင်နိုင်သည်။ တနည်းအားဖြင့်ယန္တရားကိုပြသရန်နေရာတွင်သော့ခတ်ထားနိုင်သည်။ အစုံ၏သစ်ပင် -toting ထိပ်မှတက်ကျနော်တို့အခြားရည်ညွှန်းသောနောက်ဆုံး function ကိုရှာတွေ့နိုင်ပါသည် Minecraftစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ကမ္ဘာမျိုးဆက်
အချို့သဲများကိုလေထဲတွင်မျောနေသည်ဟုဖော်ပြထားသော်လည်းအနီးအနားရှိခလုတ်ကိုဖွင့်ပါ။ အောက်ပါပုံမပေါ်သောအရိုးစုများသို့ပြိုကျမည့်လုပ်ကွက်များကိုသင်ပို့ပေးပါလိမ့်မည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်၎င်းသည် set ၏အရွယ်အစားနှင့်စျေးနှုန်းကိုထည့်သွင်းစဉ်း စား၍ မရသည့်ပြသနာများသည်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ပို၍ အရေးကြီးသည်မှာ၎င်းတို့အားလုံးသည်အကြောင်းအရာနှင့်အလွန်သင့်တော်သည်။
တွင်ထည့်သွင်း 21169 ပထမ ဦး ဆုံးစွန့်စားမှု သိုး၊ နွား၊ ocelot၊ အရိုးစုနှစ်ခုနှင့်ကစားသမားများဖြစ်သည့် Steve နှင့် Alex တို့ဖြစ်သည်။ အဆိုပါပထမသုံးခုသည်သင်အများဆုံးရှာတွေ့နိုင်သောသာမန်ဗားရှင်းမဟုတ်ပါ Minecraft ထံမှတိုက်ရိုက်ယူပွဲနှင့်အတူအစုံ Minecraft Eartဇ။ အဲဒီအစား၊ သင့်ရဲ့လူအုပ်ကြီးထဲကိုချို၊ သိုး၊
ဤအသစ်သော Lego ၏မျိုးကွဲ classic သတ္တဝါများကိုကောင်းစွာကွပ်မျက်ပြီးတစ် ဦး ချင်းစီ၏ရောင်စုံပုံသဏ္theာန်သည်ကျန်အစုနှင့်ပုံမှန်ကိုဖြည့်စွက်ထားသည် Minecraft အသေးစားရုပ်ပုံများလည်းပါဝင်သည်။
£ 54.99 / $ 69.99 / € 59.99 မှာ 21169 ပထမ ဦး ဆုံးစွန့်စားမှု ဝေးအားဖြင့်အများ၏စျေးအသက်သာဆုံးဖြစ်ပါတယ် Lego Minecraft သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်းကိုလုပ်ကိုင်သည်၊ သို့သော် ၄ င်း၏အတိုင်းအတာနှင့်ထူးခြားသောလူအုပ်များမှတဆင့်တန်ဖိုးရှိသောခံစားမှုကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည်။ အပိုင်းအစအရေအတွက်သည်များသောအားဖြင့်မဖြစ်နိုင်သော်လည်းအကူအညီများအတွင်းပါ ၀ င်သောအုတ်များသည်မော်ဒယ်လ်၏အရွယ်အစားကိုတိုးမြှင့်ပေးပြီး၎င်း၏တန်ဖိုးကိုဆက်လက်တိုးပွားစေသည်။
များအတွက်ဖော်ပြထားသောစျေးနှုန်း 21169 ပထမ ဦး ဆုံးစွန့်စားမှု သင်ရရှိသည့်အရာနှင့် ပတ်သက်၍ အတိအကျမှန်ကန်သည်ဟုခံစားရပြီး၎င်းသည်ကုန်ကျစရိတ်ကို၎င်းသည်အလွန်ကောင်းသောအရာတစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်သည် Lego Minecraft set - နေသမျှကာလပတ်လုံးသင်ဘဏ်ကိုမချိုးဖဲ့နိုင်သည့်အခင်းအကျင်းကိုကိုယ်စားပြုဖို့ပိုကြီးတဲ့တည်ဆောက်ချင်တယ်အဖြစ်။
အမည်ရှိအစုဘို့ 21169 ပထမ ဦး ဆုံးစွန့်စားမှု, ဒီမော်ဒယ်က၎င်း၏ပထမ ဦး ဆုံးမျိုးမဟုတ်ကြောင်းနှင့်သင်ခန်းစာများကိုပြသကြောင်းပြသထားတယ် Lego Minecraft ဒီဇိုင်နာများသည်လွန်ခဲ့သော ၇ နှစ်တာကာလအတွင်းနည်းစနစ်အသစ်များ၊ အပိုင်းအစများ၊ ideas.
၎င်းကိုအခြေခံထားသည့်ဂိမ်းသည်ကံမကောင်းအကြောင်းမလှဘဲအဆုံးသတ်သွားနိုင်သော်လည်း၎င်းသည်ပြောရန်လုံခြုံသည် Lego Minecraft 21169 ပထမ ဦး ဆုံးစွန့်စားမှု ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ဆောင်ပုဒ်နှင့်အကြားမိမိခြေနှစ်ချောင်း၌ရပ်နေစဉ်ချည်ပိတ်၏အဓိကအင်္ဂါရပ်ကိုတိကျစွာဖမ်းယူနိုင်ခဲ့သည် Lego အုပ်စု၏အဆက်မပြတ်ကြီးထွားလာနေသောကတ်တလောက်။
တိုတိုပြောရရင်, 21169 ပထမ ဦး ဆုံးစွန့်စားမှု အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသည် Lego Minecraft တည်ဆောက်ရန်၊ အတူကစားရန်သို့မဟုတ်ပြသရန်အတွက်မော်ဒယ်လ်သည်အချိန်ကြာမြင့်စွာသောအနုပညာရှင်များအားမျှော်လင့်ထားသည့်အရာတစ်ခုကိုမြည်းစမ်းလိုသောနှစ် ဦး စလုံးအတွက်သင့်လျော်သောရွေးချယ်မှုပြုလုပ်သည်။
သင်ကူညီနိုင်သည် Brick Fanatics'' ဝယ်ယူခြင်းဖြင့်အလုပ် 21169 ပထမ ဦး ဆုံးစွန့်စားမှု (သို့မဟုတ်အခြားမည်သည့် Lego Minecraft အစုံ!) ကျွန်တော်တို့ရဲ့တ ဦး တည်းမှတဆင့် တွဲဖက်လင့်ခ်များ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
LEGO Minecraft 21169 The First Adventure ကိုတည်ဆောက်ရန်မည်မျှကြာမည်နည်း။
21169 ပထမ ဦး ဆုံးစွန့်စားမှု ပုံစံသည်အတော်အတန်ရိုးရှင်းသော်လည်းသိသိသာသာအတွေ့အကြုံရှိခြင်းဖြင့်တည်ဆောက်ရန်သင့်အားတစ်နာရီခန့်ကြာလိမ့်မည်။ တည်ဆောက်မှုနှင့်သင်၏အချိန်ကိုယူရန်သင်သွားသည့်အတိုင်းလုပ်ကွက်တစ်ခုစီကိုတန်ဖိုးထားခြင်းသည် ပို၍ ပျော်စရာကောင်းပေမည်။
LEGO Minecraft 21169 ၏ပထမ ဦး ဆုံးစွန့်စားမှုတွင်မည်မျှအပိုင်းအစများရှိသနည်း။
21169 ပထမ ဦး ဆုံးစွန့်စားမှု ၅၄၂ ခုပါ ၀ င်သည့်အနက် ၁၄ ခုသည်စတစ်ကာများကပ်ထားခြင်းမရှိဘဲပုံနှိပ်ထားသည်။ ထိုအရေအတွက်သည်၎င်းကိုအခင်းအကျင်း၏အဆင့်ပေါင်းစုံသောသတ္တုတွင်းများထဲမှအသေးငယ်ဆုံးဖြစ်သည်။
LEGO Minecraft 21169 ပထမဆုံးစွန့်စားမှုသည်မည်မျှကြီးသနည်း။
21169 ပထမ ဦး ဆုံးစွန့်စားမှု အရွယ်အစား ၂၄ စင်တီမီတာ၊ အရှည် ၁၉ စင်တီမီတာနှင့်အကျယ် ၁၈ စင်တီမီတာရှိသည်။ အရွယ်အစားကိုသေးငယ်သောအရွယ်အစားအဖြစ်ခေါက်ရန်ရွေးစရာမရှိပါ။ Minecraft 21147 The Bedrock Adventures ကိုအပါအဝင်မော်ဒယ်များ။
LEGO Minecraft 21169 The First Adventure သည်မည်မျှကုန်ကျမည်နည်း။
21169 ပထမ ဦး ဆုံးစွန့်စားမှု £ 54.99 / $ 69.99 ကုန်ကျသည် €59.99 နှင့်ယခုမှရရှိနိုင်ပါသည် LEGO.com မတ်လ ၁ ရက်နေ့တွင်ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာပြီးနောက်၎င်းသည်အဓိကအကြောင်းအရာအတွက်နိဒါန်းအဖြစ်သတ်မှတ်ထားသောအစုများအတွက်အလွန်မျှတသောစျေးနှုန်းဖြစ်သည်။
← BrickLink သည်ဗြိတိန်နှင့်အီးယူအသုံးပြုသူများအတွက်အခွန်အကောက်ဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုများကိုကြေငြာခဲ့သည်
LEGO နှင့်မာနထောင်လွှားသည့်လကိုဂုဏ်ပြုပါ Ideas →